एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता होला ? « Pahilo News
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता होला ?
प्रकाशित मिति :3October, 2017 9:54 am
१७ असोज । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय नेकपा एमालेको आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकले गरेसँगै चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा दुई ठूला वामपन्थी दलहरु एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेलका लागि प्रयत्न सुरु भएको छ । विगतका निर्वाचनहरु एक्लाएक्लै लडेका यी दुई वामपन्थी दलबीच चुनावी तालमेल हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
अझ, माओवादी केन्द्रले त एक कदम अघि बढेर पार्टी एकता गर्ने कुरा उठाउन थालेको छ । विगतदेखि नै वामपन्थी शक्तिहरुबीच एकता हुनुपर्ने कुरा माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेताहरुले उठाउँदै आएका छन् । सोमबार मात्रै माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले एमालेसँग पार्टी एकता गर्नेबारे छलफल गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले एमालेसँग पार्टी एकता वा चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा तीन शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवारीसमेत दिएको छ । माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता र चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ ।
अघिल्लो दिनमात्रै एमाले स्थायी कमिटी बैठकले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र संघको चुनावमा देशभक्त, प्रगतिशल र वामपन्थी दलसँग तालमेल र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि असोजको पहिलो साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि वामपन्थी र देशभक्त शक्तिसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।